The One and Only Ivan (2020) - Myanmar Subtitle Movie
HomeComedyThe One and Only Ivan (2020)
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့…. Imdb 6.8 အထိရရှိထားတဲ့… The one and only Ivan ဆိုတဲ့ ကားလေးပါ…. 12 ရက် 8 လ ပိုင်းမှထွက်ရှိထားပြီး…. အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ Live action ကားတစ်ကားလို့ပြောရမှာပါ…. ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက် မင်းသမီး Angelina jolie လည်း voice actor အဖြစ်နဲ့ပါ၀င်ပေးထားပါတယ်…..
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်းလေးက အရမ်းကောင်းနေဘီဆိုတာ ​ရိပ်မိနေလောက်ပါပြီ….. ဟုတ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ကနေဒါ မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တစ်ကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို… ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတာပါ….
ပုံဆွဲတော်တဲ့လူ၀ံလေး တစ်ကောင်ပေါ့…. ဒါပေမယ့် Ivan က သူငယ်ငယ်လေးကတည်းက … ပုံဆွဲတာတွေကိုမလုပ်ရပဲနဲ့… သူ့သခင်နဲ့အတူ ဆပ်ကပ်မှာဖျော်ဖြေပေးနေရတယ်….. သူကတော့ တစ်ကယ့် စတားပေါ့…. လူတွေအားလုံးကလည်း မျောက်၀ံကြီး စိတ်တိုပြတယ် … ဆိုတာကို လာကြည့်ကြတော့ သူက စတားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေ….
ဒါပေမယ့်သူက အမှန်တော့.. စိတ်ဆိုးတက်တဲ့ မျောက်၀ံ တစ်ကောင်ဖြစ်မနေခဲ့ပါဘူး…. ဒီလိုနဲ့သူတို့တွေ ပြပွဲတွေကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြသလိုက်တဲ့အခါမှာ…. လူတွေက ရိုးအီသွားပြီး… ကြည့်ရှုသူတွေ ကျဆင်းလာပါတော့တဟ်….. ဒီလိုနဲ့ Big top mall ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ivan ရဲ့သခင်ဟာ ပရိတ်သတ်တွေ များလာအောင်… အကြံဥာဏ်ထုတ်ပါတော့တယ်….
အော်… တစ်ခုမေ့သွားတာက.. Ivan မှာ က ဘော့လို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးရယ်… စတယ်လာ လို့ခေါ်တဲ့ ဆင်ကြီးရယ် ဖျံလေးတစ်ကောင်ရယ် ယုန်လေးရယ် ကြက်လေးရယ်ဆိုပြီး… သူငယ်ချင်းတွေရှိပါသတဲ့ဗျာ… ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေ ရဲ့ ပြပွဲထဲကို… ရူဘီ ဆိုတဲ့ ဆင်ပေါက်မလေးတစ်ကောင် ရောက်လာပါတော့တယ်…. ဟုတ်ပါတယ် ရူဘီရောက်လာတော့ သူတို့ပြပွဲက အရင်လိုပြန်စည်ကားသွားခဲ့တယ်…. နောက်ပိုင်းဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ပရိသတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲ ဇာတ်ကားလေးထဲ စီးမျောလိုက်ပါဦးဗျာ …
Crd: Gold Channel
HD	5K	02:10:29
HD	594	01:54:14
HD	5K	01:44:05
HD	2K	01:00:03
Squid Game (2021) TV Series
HD	3K	01:05:08